စိတ်ကျရောဂါ ဆိုရာဝယ် . . . | Myanma Radio and Television
စိတ်ကျရောဂါ ဆိုရာဝယ် . . .
စိတ်ကျရောဂါ (Depression)သည် မိမိတို့စိတ်အခြေအနေတွင် ဖြစ်ပေါ်သော ခံစားမှု၊ အပြုအမူနှင့် တစ်ကိုယ်ရေခံစားမှုတွင် ညှိုးနွမ်းမှုခံစားနေရသော စိတ်အခြေအနေကိုဆိုလိုသည်။
ထိုစိတ်အခြေအနေတွင် မိမိတို့ခံစားနေရသော၊ နေ့စဉ်ပြုမူနေကျသော အပြုအမူများသည် ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။
ယခင်က ဖျတ်လတ်တက်ကြွသောသူများသည် လေးလံထိုင်းမှိုင်းခြင်းမျိုးကဲ့သို့ ဖြစ်တတ်သည်။
စိတ်ကျရောဂါ၏အဓိက ရောဂါလက္ခဏာတွင် ပုံမှန်အိပ်နေကျအချိန်များထက် အလွန်အကျွံအိပ်စက်ခြင်း ဖြစ်တတ်သည်။ ထိုအပြင် နှလုံးတုန်ခြင်း၊ ရင်ထဲတွင်တလှပ်လှပ်ဖြစ်ကာ မောပန်းခြင်းနှင့် ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာ၊
လေချုပ်ဝမ်းချုပ်ခြင်းများဖြစ်တတ်သည်။ စိတ်ကျနေသောအခြအနေတွင် ကိုယ်တွင်းမှ အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုသည် ပုံမှန်မဟုတ်သောကြောင့် စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများဖြစ်ပေါ်တတ်သည်။
ထိုအခြေအနေများတွင် ရောဂါလက္ခဏာကိုကုသပေးခြင်းထက် စိတ်အခြေအနေကိုတိုးတက်လာစေရန် ပြုလုပ်ပေးခြင်းသည်သာ မှန်ကန်သောကုသမှုပုံစံဖြစ်သည်။
စိတ်ကျရောဂါဖြစ်သော အကြောင်းအရင်းများစွာရှိသည်။ ယနေ့ခေတ်ကဲ့သို့ အပြိုင်အဆိုင်များသော ခေတ်ကြီးတွင် စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှုန်းသည် တိုးပွားလာသည်။ ငယ်စဉ်ဘဝတွင်လျစ်လျှူရှုခံရမှု၊ စော်ကားခံရမှု၊နှင့် နှိမ့်ချခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတို့သည် စိတ်ကျရောဂါဖြစ်စေသည်။
ထိုအပြင် အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်လာမှု၊ အမျိုးသားစွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းလာမှုနှင့် အမျိုးသမီးများသွေးဆုံးချိန်တွင်လည်း ဖြစ်တတ်သည်။ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုနှင့် အချို့သော ဆေးဝါးများကို ကြာရှည်စွာစွဲမြဲသုံးစွဲလျှင်လည်း စိတ်ကျရောဂါဖြစ်တတ်သည်။
ထို့ပြင်အချို့သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ အဓိကရောဂါလက္ခဏာသည် စိတ်ကျခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနောက်တွင် ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်း၊ အသံများကြားခြင်း၊ အာရုံဝေးဝါးခြင်းတို့ဖြစ်တတ်သည်။ စိတ်ကျ
ရောဂါအခြေအနေတွင် ဖမ်း၍ ကုသမှုခံယူနိုင်လျှင်မူ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများကို အတော်အတင့်ကုသနိုင်သည်။
စိတ်ကျရောဂါတွင်လည်း စိတ်ကျခြင်းတစ်ခုတည်း (monopolar de-pression)နှင့် စိတ်ကျစိတ်တက်ခြင်း(bipolar depession) ဟူ၍ အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်။ သာမန်လူတစ်ယောက် အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့်
ခံစားရသောအခြေအနေတွင် ဖြစ်ပေါ်သောစိတ်ကျခြင်းကိုmonopolardepression ဟုခေါ်သည်။
ထိုအခြေအနေကို လူသားတိုင်းလိုလို ခံစားဖူးသည်။ Bipolar dep-ression အများစုသည် တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ဓာတ်သည် တက်ကြွနေသကဲ့သို့ တစ်ခါတစ်ခါ စိတ်ဓာတ်သည် မိမိကိုယ် မိမိသတ်သေချင်သည့်အထိ ကျနေတတ်သည်။ ထိုအခြေအနေများသည်အနုပညာရှင်များတွင်တွေ့ရသည်။
ထို့ကြောင့် အနုပညာရှင်များသည် မိမိကိုယ်မိမိ သတ်သေခြင်းများများလှသည်။ စိတ်ကျရောဂါသည် လူတိုင်းနီးပါးတွင် ခံစားနေရသော ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ပြိုင်ဆိုင်မှုများသော အခြေအနေတွင်မျှော်သည် လူသားတို့ကိုစိတ်ကျရောဂါကိုဖြစ်စေသည်။
ထို့ကြောင့် ထိုအခြေအနေမှ ရုန်းထွက်ရမည်။ စိတ်ဓာတ်ကျလျှင် အစာစားချင်စိတ်လျော့နည်းလာသည်။ အလွန်အကျွံအိပ်ကာ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုကမောက်ကမဖြစ်စေ၍ ရောဂါများကိုဖြစ်စေသည်။
စိတ်ကျရောဂါအတွက် အကောင်းဆုံးကုသခြင်းမှာ မိမိတို့ကိုယ်ကို မိမိတို့ပြန်လည်တည်ဆောက်လိုစိတ် ရုန်းထလိုစိတ်ဖြစ်သည်။ ထိုစိတ်ဖြင့်သာ အရာရာကိုတွန်းလှန်၍ ကျန်းမာသောနေ့ရက်များကိုဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ။